🥇 okuzenzakalelayo kwedeski losizo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 55
Ividiyo yokuzenzakalela kwedeski losizo
Oda ideski losizo elizenzakalelayo
Eminyakeni yakamuva, i-Help Desk automation ibilokhu idingeka kakhulu, evuma izinsizakalo ezikhethekile zokuthuthukisa ngokushesha ikhwalithi yokuxhumana nabasebenzisi, ukwenza lula ukubika kanye nemibhalo yokulawula, ukwamukela nokucubungula izicelo, nokuphendula ezinkingeni ngesivinini sombani. Esimeni sokuzenzakalela, akudingekile ukuba ukhathazeke ngokuthi inqubo ethile Yedeski Losizo ihlala ingaphelele, umphathi akaphenduli esicelweni, akakwazi ukulungisa amafomu adingekayo ngesikhathi, ukudlulisela imininingwane kochwepheshe bokukhanda, futhi ashintshele ekwenzeni umsebenzi ngokuphelele. umsebenzi omusha.
Ukuthuthukiswa Kwesoftware ye-USU (usu.kz) bekulokhu kusebenza endaweni yosekelo lwabasebenzisi beDeski Losizo isikhathi eside impela, okunquma ikhwalithi ephezulu yokuzenzakalela, uhla olubanzi lwemikhiqizo ye-IT, kanye nobubanzi obusebenzayo obuhlukahlukene nobuhlukahlukene. . Akuyona imfihlo, akuzona zonke izinkinga ezingafihlwa ngokuzenzakalelayo, amaphutha athile esakhiwo kanye nokushiyeka kokuphatha kungaxazululwa. Irejista ye-Help Desk inikeza ulwazi oluningiliziwe ngamaklayenti. Abasebenzisi abanayo inkinga yokubheka umlando wezicelo, ukuthola inkosi yamahhala ngezici ezithile zohlelo lokusebenza. Uma kwenzeka i-automation, kunzima ukuphuthelwa i-nuance enganquma kamuva. Uma ochwepheshe bedinga izingxenye ezengeziwe kanye nezinto zokwakha, imishini ekhethekile, izingxenye ezisele, khona-ke ulwazi lufakwe embikweni, olungiselelwe uhlelo lwe-automation lapho kuqedwa ukulungiswa. Inkundla Yedeski Losizo ivumela ukushintshisana ngokukhululekile kwedatha, umbhalo, namafayela ayingcaca, ukusabalalisa ngokuzenzakalelayo umthwalo womsebenzi kubasebenzi benhlangano, kuqashwe ngokuqinile ukugcinwa kwezinsuku eziwumnqamulajuqu zokulungisa. Ngaphandle kwe-automation, kunzima ukuxhumana ngempumelelo namakhasimende, ukuhlanganyela ekusakazweni kwe-SMS yokukhangisa, futhi umane wazise ikhasimende ukuthi umsebenzi usuqediwe. Uma zingekho izinkinga nge-oda elilodwa noma amabili, lapho-ke kunenqwaba yazo, kuvela ubunzima obuthile. Inzuzo ehlukile yeplathifomu Yedeski Losizo yikhono lokuzivumelanisa nezimo ezithile zezilungiselelo zokusebenza, okubaluleke kakhulu ku-automation. Inkampani ngayinye ichaza imisebenzi yayo: imisebenzi yezezimali, ukuxhumana namakhasimende, ubudlelwano bokusebenza, njll. Izinhlelo zeDeski Losizo sezisabalele ezimbonini eziningi nasezindaweni zokusebenza, okuhlanganisa izikhungo zesevisi ezijwayelekile, izinhlangano zezokwelapha, izinsizakalo ezisekela abasebenzisi, nama-ejensi kahulumeni angochwepheshe ukuxhumana nabantu. Okuzenzakalelayo kubukeka njengesixazululo esingcono kakhulu. Kunzima ukuthola iphrojekthi esebenzayo yekhwalithi engcono eshintsha kakhulu ukuphathwa ngendaba yamaminithi. Inkundla Yedeski Losizo ihileleke kusevisi futhi isekela ulwazi lwabasebenzisi, iqapha imisebenzi yamanje nehleliwe, ilungiselela imithetho nemibiko. Ngokuzenzakalela, ukubhalisa isikhathi sokufaka isicelo kwehliswa kakhulu. Abasebenzisi akudingeki benze izenzo ezingadingekile. Inqubo yokubhalisa ithatha imizuzwana embalwa. Umhleli uqinisekisa ukuthi konke ukulungiswa komsebenzi kuqedwa ngesikhathi. Uma imisebenzi ethile idinga izinto ezengeziwe, izingxenye, nezingxenye ezisele, khona-ke ubuhlakani bokwenziwa buhlola ngokushesha ukutholakala kwazo noma kusize ukuhlela ngokushesha ukuthenga.
Ukucushwa kwe-Help Desk kulungele bonke abasebenzisi, ngokunganaki amakhono ekhompyutha nolwazi. Nge-automation, ukulungiswa kugadwa kuzo zonke izigaba nakuzo zonke izigaba. Ulwazi lwethulwa ngendlela ebonwayo. Akunqatshelwe ukwazisa amakhasimende mayelana nezinyathelo zokulungisa ngokuthumela i-SMS, ukubika izindleko zesevisi, ukukhangisa izinsizakalo zenkampani, njll. Abasebenzisi abanayo inkinga yokushintshisana ngedatha yokusebenza ngama-oda amanje, umbhalo, namafayela ayingcaca. , ukuthola uchwepheshe wamahhala womsebenzi othile. Kulula ukubonisa amamethrikhi okusebenza ezikrinini ukuze uthole ukuqonda okunengqondo kokusebenza kwelungu ngalinye labasebenzi. Ukucushwa kweDeski Losizo akulandeleli nje kuphela izenzo zamanje nezihleliwe, kodwa futhi kulungiselela ngokuzenzakalela imibiko, ukusebenza kwamarekhodi, futhi kunquma izindleko zezinsizakalo.
Ngokuzenzakalelayo, iphrojekthi ye-automation ifakwe imodyuli yokuxwayisa ukugcina izandla zethu ku-pulse, ukuthenga izingxenye ezidingekayo ngesikhathi, ungaphuthelwa umhlangano obalulekile, ungakhohlwa mayelana nokuqedwa kwezinsuku zokugcina zomsebenzi, njll. amasevisi nezinhlelo azikhishiwe ukuze kukhuliswe kakhulu umkhiqizo wesevisi. Uhlelo lungasetshenziswa kalula yinoma yisiphi isikhungo sesevisi, umnyango wokusekela ikhompuyutha, kanye nenhlangano kahulumeni. Akuzona zonke izinketho ezifakiwe ekucushweni okuyisisekelo komkhiqizo. Ezinye izici ziyatholakala ngenkokhelo. Sincoma ukuthi ufunde uhlu oluhambisanayo. Ukukhethwa kokucushwa okufanele kufanele kuqale ngenguqulo yedemo ukuze wazi, uzilolonge, ufunde ububanzi obusebenzayo ngendlela ephansi. Inqubo yebhizinisi ibonakala: ubuchwepheshe obukhona bokuqaliswa kwenqubo yebhizinisi, isakhiwo esikhona sesistimu yebhizinisi, amathuluzi okuzenzakalelayo, imishini, izindlela, njll, ukuqinisekisa ukuqaliswa kwenqubo. Izinkomba eziyinhloko zokuhlola ukusebenza kwezinqubo zebhizinisi yinombolo yemikhiqizo yekhwalithi enikeziwe, ekhokhelwe isikhathi esithile, inani labathengi bemikhiqizo, inani lemisebenzi ejwayelekile okufanele yenziwe ekukhiqizeni imikhiqizo isikhawu sesikhathi esithile, izindleko zezindleko zokukhiqiza, ubude besikhathi sokusebenza okujwayelekile, ukutshalwa kwezimali okukhulu ekukhiqizeni, kanye nomsizi onekhono njengeDeski Losizo elizenzakalelayo.